बाजुराको तरकारीः चामलभन्दा आलु महँगो किन ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > बाजुराको तरकारीः चामलभन्दा आलु महँगो किन ?
बाजुराको तरकारीः चामलभन्दा आलु महँगो किन ?
३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:३५ bampijhyala
०३ पौष, बाँपीझ्याला, बाजुरा । बाजुराका विभिन्न स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छोई नसक्नु भएको छ । बाजुराका व्यापारिक केन्द्र कोल्टी, पीलुचौर, धुलाचौर र भारतीकौषाडी हाटबजारलगायत स्थानीय बजारमा खाद्यान्नभन्दा तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो । दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको हो ।
बजारमा दैनिक रूपमा बिक्री वितरण हुँदै आएका आलु, प्याज, बन्दा, काउली, गोलभेडालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तेब्बर वृद्धि भएको छ । पहिले ३० रुपैयाँमा पाइने आलुको मूल्य अहिले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ पुगेको स्थानीय जमुनका कार्कीले बताइन् । त्यस्तै, प्याज केजीको २६० र गोलभेडाको मूल्य १०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
तरकारी व्यापारी चन्द्रबहादुर शाही भने बेमौसमी सिजन भएकाले तरकारीको मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय स्तरमा मागअनुसार तरकारी उत्पादन हुँदैन । बाहिरबाट ल्याउँदा स्वतः मूल्य बढी हुन्छ । कोही कसैले बढी मूल्य लिएर बेचेका हुन सक्छन् । उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा तरकारीको भाउ बढेको हो’, उनले भने ।
उत्पादनमा कमी र आवश्यकताभन्दा बढी माग भएकाले पनि तरकारी महँगिएको व्यवसायीको दाबी छ । खाद्यान्नभन्दा तरकारीको मूल्य बढी भएपछि स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग तरकारी किसानको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई निर्माण व्यवसायी महासंघको सम्मान
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै ३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:३५
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी ३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:३५
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु ३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:३५
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? ३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:३५
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। ३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:३५